Ungaqonda njani ukuba umntu usigcina kwimakrofoni (i-PC kunye ne-smartphone)
Ubumfihlo obulungileyo kuye kusiba nzima ukufezekisa, ngakumbi xa singqongwe zizixhobo ze-elektroniki ezikwaziyo ukuthatha nangaliphi na ixesha yonke into esiyithethayo okanye izandi ezikhutshwe yindawo esihlala kuyo okanye esisebenza kuyo. Ukuba sixhalabile ngokukodwa ngemfihlo yethu kwaye asifuni kuviwa okanye sihlole ngemakrofoni yePC okanye i-smartphone yethu, kwesi sikhokelo siza kukubonisa wazi njani ukuba kukho umntu osipimpayo ngemakrofoni, Senza zonke iitsheki eziyimfuneko kuthi Windows 10 IiPC, kwiiMacs zethu okanye kwiiMacBooks, kwii-smartphones zethu ze-Android okanye iipilisi nakwii-iPhones / iPads.
Ekupheleni kwetshekhi Siza kuqinisekisa ukuba asinazo naziphi na izicelo "zokuhlola" okanye ezisebenzisa iimvume zokufikelela kwimakrofoni ngaphandle kwemvume yethu. (okanye mhlawumbi bafumana imvume yethu xa besingxamile, sisebenzisa ubuncwane bethu).
FUNDA OKANYE: Khusela ikhamera yakho yewebhu yePC kunye nemakrofoni ukunqanda ukuhlohlwa
Uqinisekisa njani ukusetyenziswa kwemakrofoni
Zonke iikhompyuter zala maxesha kunye nezixhobo ze-elektroniki zibonelela ngeendlela zokujonga ukuba umntu othile usiponononga ngemakrofoni: kwimeko yangoku, kunzima ukuhlola imakrofoni ngaphandle kokunxibelelana nomsebenzisi omncinci (ngubani omele afake isicelo okanye acofe ikhonkco elithile ukuqala ukuhlola) okanye ngaphandle kweendlela zokuphamba eziphambili (eziyimfuneko ukunqanda ulawulo olwenziwa ziinkqubo zokusebenza). Konke oku kusebenza de sithethe ucingo locingo lokusingqongileyoKwezi meko iindlela zokuhlola abantu zahlukahlukene kakhulu kwaye zisetyenziswa ngamapolisa ngokomyalelo weenkundla ukuba zihlole abarhanelwa.
Indlela yokujonga imakrofoni ngaphakathi Windows 10
In Windows 10 sinako ukulawula ukuba zeziphi iinkqubo kunye neenkqubo ezinokufikelela kwimakrofoni ye-webcam okanye (ezinye ii-microphone ezixhunyiwe) ngokuvula imenyu yokuQala esezantsi ekhohlo, ucofe UlungelelwanisoUkucinezela kwimenyu Imfihlo kunye nokuvula imenyu Imakrofoni.
Ukuskrola efestileni siya kuba nakho ukujonga imvume yokungena kwimakrofoni zombini kwizicelo ezikhutshelwe kwiVenkile kaMicrosoft nakwiinkqubo zesiko; Kwimeko yokuqala, sinokucima ukufikelela kwimakrofoni ngokucima iqhosha ecaleni kwegama lesicelo, ngelixa kwimeko yeenkqubo zesiko kuya kufuneka sizivule ngokwazo kwaye sitshintshe ubumbeko olunxulumene nemakrofoni. Ukuba sifuna fumana ubumfihlo obuphezulu kwaye ushiye ukufikelela kwimakrofoni kuphela kwizicelo "ezikhuselekileyo", sicebisa ukuba ukhubaze iswitshi ecaleni kwezicelo ezingafunekiyo kwaye khipha iinkqubo ezikrokrisayo okanye esingazazi imvelaphi yazo. Ukwenza nzulu le meko sinokufunda isikhokelo Ungasusa njani iinkqubo ngesandla ngaphandle komkhondo okanye iimpazamo (Windows).
FUNDA OKANYE: Hlola i-PC kwaye ubone indlela abanye abayisebenzisa ngayo
Ujonga njani imakrofoni kwi-Mac
Ngaphandle kwenkqubo yokusebenza kweMac kunye neMacBooks, oko kukuthi, i-macOS, sinokujonga ukuba kukho umntu osiphetheyo ngemakrofoni ngqo kuseto. Ukuqhubeka sivula iMac yethu, sicinezela i-icon ye-Apple yokuluma kwinxalenye ephezulu yasekhohlo, sivula imenyu Ukhetho lwenkqubocofa i icon Ukhuseleko kunye nemfihlo, khetha ithebhu Imfihlo kwaye ekugqibeleni masiye kwimenyu Imakrofoni.
Kwiwindow siza kubona zonke izicelo kunye neenkqubo ezicele ukufikelela kwimakrofoni. Ukuba sifumana inkqubo okanye usetyenziso esingayaziyo imvelaphi okanye ekungafanelekanga ukuba ibekhona, singasusa uphawu lokutshekisha ecaleni kwegama lalo kwaye, sakuba sichongiwe, sinokuqhubeka nokuyikhupha ngokuvula usetyenziso. Umvumelingokucofa kwimenyu Izicelo kwicala lasekhohlo, ukufumana i-spy app kwaye ucofe kuyo, uqhubeke nokucinywa ngokucinezela Yiya kwinkunkuma.
Ungayijonga njani imakrofoni kwi-Android
Iifowuni ze-Android kunye neetafile zihlala zizixhobo ezilula kakhulu zokuhlola ukususela oko inkqubo yokusebenza ayisoloko ihlaziya Kwaye, ngenxa yokusetyenziswa kwayo ngokubanzi, ayinguye wonke umntu ojonga ngononophelo ukuba ngaba ii -apps ezifakiweyo zihlola imakrofoni. Ukujonga usetyenziso olunemvume yokufikelela kwimakrofoni yesixhobo sethu, vula usetyenziso Ulungelelwaniso, masiye kwimenyu Imfihlo -> Ulawulo lokugunyazisa okanye kwimenyu Ukhuseleko -> Iimvume kwaye ekugqibeleni cinezela kwimenyu Imakrofoni.
Kwiskrini esivulekileyo siza kubona zonke izicelo ezicele ukufikelela kwimakrofoni okanye ezinemvume kodwa okwangoku "azisebenzisi". Ukuba siqaphela nasiphi na isicelo esingaqhelekanga okanye asikhumbuli ukuba siyifakile, siyaqhubeka ngokususa ukusebenza kwemakrofoni (cofa nje iqhosha ecaleni kwegama lesicelo) kwaye kwangoko ushenxise usetyenziso olukrokrisayo, ukuthintela ukwenziwa okulandelayo. Ngokumalunga noku sinokufunda isikhokelo sethu Khipha usetyenziso kwi-Android ngokupheleleyo, nokuba konke kube kanye.
Ukuba sifuna ukuba nolwazi olubonakalayo lwezicelo ezifikelela kwimakrofoni, nokuba asizisebenzisi izicelo ezisebenzisa ngokucacileyo imakrofoni, sicebisa ukuba ufake usetyenziso lwamahala lokuFikelela, olunikezela indawo encinci eqaqambileyo kwikona ephezulu ngasekunene. Nanini na xa isicelo okanye inkqubo ingena kwimakrofoni nakwikhamera.
FUNDA OKANYE: Jonga / hlola umnxeba womnye umntu (i-Android)
Ungayijonga njani imakrofoni kwi-iPhone / kwi-iPad
Kwi-iPhone kunye ne-iPad, ngokufika kwe- iOS 14, ingxelo ebonwayo ngokufikelela kwikhamera okanye kwimakrofoni yongezwa: kwezi meko i-orenji encinci, ebomvu okanye ichaphaza eliluhlaza izakuvela ngaphezulu ngasekunene, ukuze wazi ngokukhawuleza ukuba kukho umntu osipimpayo ngemakrofoni.
Ukongeza koku kungqinisiswa kwangoko, sinokuhlala silawula usetyenziso olufikelela kwimakrofoni kwizixhobo zeApple ngokuvula usetyenziso. Ulungelelwaniso, Ngokucinezela kwimenyu Imfihlo, kunye nokuqinisekisa ngokobuqu usetyenziso olungena kwimakrofoni, ukukhubaza ezo esingazaziyo okanye esingazange sizifake. Ukwandisa kakhulu ubumfihlo xa usebenzisa i-iPhone, siyakumema ukuba ufunde isikhokelo Useto lwabucala kwi-iPhone luya kwenziwa ukuba lukhuseleke.
FUNDA OKANYE: Ungayihlola njani i-iPhone
Ukuhlola imakrofoni yenye yeenjongo eziphambili zabagculi, iintlola okanye abecuphi, kwaye ngenxa yesi sizathu iinkqubo zokusebenza ziye zakhetha ngakumbi xa kufikwa ekunikezelweni kwale mvume. Kuhlala kubhetele ukudibana neemenyu kunye nokusetyenziswa okubonwe apha ngasentla, ukusoloko usazi ukuba kukho umntu osihlola ngemakrofoni, mhlawumbi afake ulwazi lomntu okanye iimfihlo zeshishini.
Ukuba siyoyika ukuba nesicelo esihlola ifowuni, sijonga ubukho besicelo esibonwe kwizikhokelo zethu. Ezona zicelo zibalaseleyo zokuhlola iifowuni eziphathwayo (i-Android kunye ne-iPhone) mi Uhlelo lokusebenza lwearhente eyimfihlo ye-Android yokuhlola, ukulandelela indawo, imiyalezo kunye nokunye.
Ukuba, ngokuchaseneyo, soyika ukuba ukuhlolwa kwemakrofoni kwenziwa ngeentsholongwane ze-Android, sicebisa ukuba ulifunde eli nqaku Khangela kwaye ususe i-spyware okanye i-malware kwi-Android.
Idatha yokuHanjiswa kweFowuni yeHuawei kunye neefayile kwiNew Smartphone
Imiba yokufikelela kwi-SPID -Indlela yokuzilungisa
Ungajonga njani ukuba isicelo se-APK yintsholongwane
Fumanisa ukuba ngaba ikhamera yakho okanye ikhamera yewebhu igqekeziwe kwaye yahlolwa kuyo
Ungasenza njani isicelo kwaye ufumane i-SPID
Ungajonga njani ukuba umntu usebenzise i-smartphone yam
Yintoni i-malware kwaye iyingozi kangakanani?
Iinkqubo zokhuseleko zeMicrosoft zeWindows 10 kunye ne-7
Ungakuvimba njani ukufikelela kwiziza zabantu abadala kwiPC, ii-Mac, ii-smartphones kunye neetafile
Yenza iiphasiwedi ezomeleleyo, ezinamandla nezizenzekelayo kwi-Chrome
Ungacima njani ukurekhodwa kwelizwi kwi-Alexa kunye noMncedisi kaGoogle
Uyenza njani isebenze ikhamera yewebhu xa uvula i-PC ngokuzenzekelayo